बारबर्दिया नगरपालिको सञ्चालन गर्‍यो एम्बुलेन्स सेवा
बर्दिया । बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले एम्बुलेन्स खरीद गरेको छ । बारबर्दिया नगरपालिकामा बिरामी बोक्नका लागि एम्बुलेन्स नभएको कारणले खरीद गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट ११ लाख ६० हजार खर्च गरेर एम्बुलेन्स ल्याएको बारबर्दिया नगरपालिकाका मेयर दुर्गाबहादुर थारुले बताए । नगरपालिकाको स्वामित्वमा नै...
पोखरा– उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै बिरामीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएका छन् । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा आज एमआरआई सेवाको उद्घाटन गर्दै उनले विद्यमान सिमित आर्थिक स्रोत एवम्...
काठमाडौँ । ‘निरोगी छु, मलाई क्षयरोग नहुन सक्छ ।’ तपाईं अनुमानमा हुनुहुन्छ ? ढुक्क नहुनुहोस् । हाम्रो शरीरमा क्षयरोगको किटाणुको जोखिम रहेको हुन्छ । यसरोगका किटाणु निष्कृय र सक्रिय दुई प्रकारका हुन्छन् । शरीरमा रहेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले निष्क्रिय क्षयरोगको कीटाणुलाई सक्रिय हुन दिइरहेको हुँदैन । तर सक्रिय क्षयरोगको कीटाणुले...
–विमलबहादुर विष्ट डोटी । बडीकेदार गाउँपालिका अत्तरकाँडाकी कल्पना ९नाम परिवर्तन० आफ्ना श्रीमान्सँगै वडा नं २ खड्यौली पुग्नुभयो । उहाँ स्थायी बन्ध्याकरणका लागि त्यहाँ पुग्नुभएको थियो । उहाँका श्रीमान्ले आफू स्थायी बन्ध्याकरण गर्न जिद्धी गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर कल्पनाका अगाडि उहाँको जिद्धीले काम गरेन । कल्पनालाई स्वा�...
काँग्रेस नेता सिटौलाको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख
काठमाडौँ । राजधानीको मण्डिखाटारस्थित ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना भएका नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएको छ । नेता सिटौलाको हेमोग्लोबिनको मात्रा कम देखिएको र रक्तचाप समेत घटेपछि शुक्रबारदेखि आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको थियो । शरीरमा रगतको मात्रा बढाउनका लागि अहिले...
चितवनमा बर्डफ्लु छैन
चितवन– भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र चितवनले हालसम्म जिल्लामा बर्डफ्लु नदेखिएको जनाएको छ । देशका विभिन्न क्षेत्रमा कुखुराजन्य वस्तु आयातमा रोक लगाएपछि कार्यालयले जिल्लामा बर्डफ्लु नदेखिएकाले ढुक्कसँग प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । केन्द्रका प्रमुख डा विजयकुमार श्रेष्ठले मकवानपुर, काठमाडौँ र पोखरामा बर्डफ्लु देखिए...
शिक्षामन्त्री पोखरेल अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । फुड प्वाइजन भएपछि बिहीबार साँझ पाटन अस्पतालमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अस्पताल भर्ना भएका छन् । मन्त्री पोखरेललाई डा पारस आचार्यको टोलीले उपचार गरिरहेको र उनको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको शिक्षामन्त्रीका सचिवालयका विनोद न्यौपानेले जानकारी दिए। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनी जाँचका लागि भरोसा अस्पताल पुगेका...
सेनानी पुडासैनीले रक्तदान गरि सहयोग गरे
गुलरिया । आपतविपद्‌ सहयोग गर्दै आएका नेपाली सेनाका एक अधिकृतले बिरामी भइ अप्ठयारोमा परेकी एक महिलालाई रक्तदान दिएर जीवन बचाउन सहयोग गरेका छ्न् । काठमाडौं घर भई नेपाली सेना भैरव प्रसाद गण गुलरिया ४ तुलापुर क्याम्प सुरक्षा गुल्मका गुल्म पति ३७ वर्षीय सेनानी उपेन्द्र पुडासैनीले सो सहयोग गरेका हुन । पुडासैनीले बार बर्दिया घर भई...
काभ्रेपलाञ्चोक । केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंलगायत अन्य जिल्लाका विभिन्न जातका कुखुरामा बर्डफ्लूजन्य सङ्क्रमण देखिएपछि जिल्लास्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले तीन नाकामा चेक प्वाइन्ट राख्ने निर्णय गरेको छ । जिल्लामा बर्डफ्लुजन्य सङ्क्रमण निभित्रियोस् भन्ने उद्देश्यले मङ्गलटार, साँगा र नाला नाकामा �...
योग र साधनाले मानिसलाई सत्मार्गमा लान्छ– योगगुरु गंगाप्रसाद ढकाल
काठमाडौं । योगगुरु गंगाप्रसाद ढकालले योग र साधनाको माध्यमबाट मानिसलाई सत्मार्गमा लाग्ने मात्र नभइ स्वास्थ्य रहन समेत सहयोग पुग्ने बताएका छन् । नियमित योग साधना र व्यायाम गर्ने, आहार विहारमा ख्याल गर्ने मानिस स्वस्थ्य हुनुका साथै जाँगरिलो र फुर्तिलो दिर्घायु हुनेसमेत प्रष्ट पारेका छन् । झापा दमकका योगगुरु ढकालले नेपालमा मात्र नभएर...
–जमुना धमला काठमाडौँ । काठमाडौँको ताकेश्वरका दुई कुखुरा पोल्ट्रीफार्ममा बर्डफ्लु भएको पुष्टि भएको छ । तारकेश्वर–७ स्थित बस्नेत टोलका श्यामसन्दुर बस्नेतको सागर पोल्ट्रीफार्म र श्यामकुमार बस्नेतको आकाश पोल्ट्रीफार्मका कुखरामा बर्डफ्लु भएको पुष्टि भएपछि २८ हजार कुखुरा नष्ट गरिएको नगर पशुशाखा प्रमुख डा।जयप्रकाश राय यादवले...
मकवानपुरमा बर्डफ्लु, चितवनमा उच्च सतर्कता
– नारायण अधिकारी चितवन । छिमेकी जिल्ला मकवानपुरमा कुखुरामा बर्डफ्लु देखिएपछि जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । पोल्ट्रीको राजधानी मानिने यस जिल्लामा भित्रने नाकाहरुमा पक्षी जन्य वस्तु आयातमा कडाइ गरिएको छ भने कृषकलाई जैविक सुरक्षामा ध्यान दिन अनुरोध गरिएको छ । भेटेनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रका निमित्त प्रमुख डा पर्शुराम...
बाँके । गत असार ११ गतेदेखि औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा आवश्यक उपकरण र विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । अत्याधुनिक प्रविधिसहित विभिन्न संरचना निर्माण भए पनि अस्पतालमा क्यान्सर विशषज्ञको क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने प्रविधि रेडियसन सेटअप नभएको हो । सञ्चालनमा आएको लामो समय...
मरणोपरान्त अङ्ग दान गर्ने उपप्रधानमन्त्री यादवको घोषणा
भक्तपुर । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले बिहीबार मरणोपरान्त अङ्ग दान गर्ने घोषणा गरेका छन् । विश्व मिर्गौला दिवसका अवसरमा ‘मिर्गौला स्वास्थ्यः जहाँसुकै जोसुकैको लागि’ भन्ने नाराका साथ शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुर र आरोग्य प्रतिष्ठान पुुल्चोक ललितपुरको संयुक्त...
काठमाडौँ । आफ्ना माग पूरा नहुने भएपछि सरकारी चिकित्सकले सेवाबाटै राजीनामा दिने बताएका छन् । पटक–पटक धर्ना, जुलुस, बहिरङ्ग (ओपीडी) सेवा बन्दलगायतका आन्दोलन गर्दा पनि चिकित्सकको मागलाई सरकारले सम्बोधन नगरेपछि उनीहरूले राजीनामा दिने तयारी गरेका हुन् । सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले माग पूरा नगरे अब सरकारी सेवामा...